Doorashada Kenya: Ma laga yaabaa in ay mar kale rabshado dhacaan? - BBC News Somali
Doorashada Kenya: Ma laga yaabaa in ay mar kale rabshado dhacaan?
8 Agoosto 2017
Lahaanshaha sawirka Kevin Ouma
Image caption Edward: Growing up in Dandora there was little time for fun and games
Adduunka ayaa soo arkay argagaxa ay lahayd rabshadihii ka dhacay Kenya sannadkii 2007-dii. Kadib doorasho lagu murmay.
Sannado kadib laba nin oo si wayn ugu lug lahaa rabshadahaas ayaa midoobay, iyaga oo isku dayaya in ay ka hortagaan in ay soo noqoto markale xaaladdaasi maadaama oo ay maanta dhacayso doorasho.
Laakiinse hadda weriye Alice McCool, ayaa sheegaya in soo noqoshada rabshaduhu ay tahay waxa ay doonayaan qaar kamid ah siyaasiyiinta iyo madaxda burcadda.
"Utaona. oo la micne ah 'waad arki doontaa'. ayaa ah hadalka ugu badan ee dhallinta deriska ah is leeyihiin," ayuu yiri Edward oo fadhiya meel qorrax ah oo kamid ah Dandora oo ku taalla bariga magaalada Niarobi. waa meel isku raran ah ayna ka dhacaan falal dembiyoodyo kala duwan.
Maalmo kahor doorashada guud ee Kenya, tartan adag uu u dhexeeyay madaxwayne Uhuru Kenyatta iyo hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga. Sawirrada muujinaya wejiyada dhoola cadaynaya ee musharrixiinta ayaa meel walba lagu dhejiyay. Basaska ayaana laga buuxiyay taageerayaal ruxaya calamo isla markaana qoob ka ciyaar samaynaya.
Edward iyo James (ma aha magacyadooda saxda ah). labadooduba toban sano kahor waxay qayb ka ahaayeen rabshadihii argagaxa lahaa ee ka danbeeyey doorashada, taasi oo ay ku dhinteen ku dhowaad 1,500 oo qof ayna ku barakeceen 600,000 oo kale.
"Wakhtigan waxaanu u isu maraynay guryaha, anaga oo dadka u sheegayna wax walba oo ay noqoto natiijada doorashadu inaan qadarino sababtoo ah waa inaan wada jir u noolaanaa," ayuu yiri James.
"Ma jirto sabab aan u baabi'inno dhul aynu wakhti dheer soo maalgashanay".
Waxay ka lugaynayaan xafiis yar oo uu leeyahay James ilaa laga gaaro guriga Edward oo aan fogayn kuna yaalla deegaanka Dandora, labada nin ayaa wada jir u galay albaab daxalaystay oo uu leeyahay iskuul hoose oo halkaa ku yaalla. Gudaha dhismaha dadka ayaa ku mashquulsan liis dheer oo ay ku qoranyihiin dadka isu diiwaan geliyay in ay codkooda dhiibtaan, 'magacyada ayaa lagu dhejiyay gidaarka iskuulka.
"Wakhtiga nasashada ayaan ku kulanay garoonka. Waxaan ku ciyaarnay kubad laga sameeyey bac" ayuu yiri Edward.
Laakiinse xaafadda sii kobcaysa ee Dandora, waxaa jira meelo yar oo loogu tala galay ciyaaraha.
Markuu jiray sagaal sano Edward waxaa uu noloshiisa kusoo qaatay waddooyinka, wuxuu u dhexeeyey in uu wax xado ama uu qashinka wax kala soo dhex baxo si uu naftiisa u quudiyo. halka James uu joogay gurigiisa, isla markaana uu la noolaa aabe habeen walba oo uu guriga imaanayo soo kaxaysta gaari uu soo xaday. markii uu da'da jiray 15 ayuu isna ka cararay guriga.
Labada wiilba waxaa ay usoo joogeen dhibaatooyin markii ay yaraayeen, wakhti yar kadib, labadooduba waxay ku biiren koox burcad ah.
"Marka aanu waynaano masii wada joogi doono, sababtoo ah waxaanu ka kala tirsanahay siyaasado isdiidan," ayuu yiri James. Tani waxay ka dhigantahay in aanay isku qabiil ahayn: Siyaasada Kenya ayaa halbeeg looga dhigaa haybta dadka.
Labada ninba waxay kaalin ka qaateen qalalaasihii dhacay 2007-8-dii, taasi oo salka ku haysay saboolnimo
Image caption Xaafadda Dandora
"Ma awoodo inaan si joogta ah u helo baahiyahayga aas-aasiga ah... Waxaan u arkay in ay tahay fursad aan ku samayn karo dhaqaale," ayuu yiri Edward.
Rabshadaha ayaa u ahaa wado uu ku kabo kaalintii uu gabay ee laga rabay dhaqan ahaan in raggu ay buuxiyaan " Waxaan muujiyay awoodayda jireed si aan dadka kale u tuso geesinimadayda", ayuu hadalkiisa sii raaciyay.
James oo hoggaamiye u ahaa koox burcad ah ayaa dhaqaale ka heli jiray siyaasiyiin iyo ganacsato si ay dadka u cabsi geliyaan. 2007-dii deegaanka Dandora waxay ahayd meel aan sharci ka jirin, dhaqdhaqaaqa kooxdiisuna waxay isu bedeel kuwa kasoo wareega luuqyada mugdiga ah una soo baxa iftiinka. (Waxay cabsi gelintoodii xilliyada habeenkii ah u wareejiyeen maalintii).
"Naftayda ayaan u ogolaaday in ay noqoto mid lagu ciyaaro, waxyaalo xunna waa dhaceen. Hantidii waa la bur-buriyay, dadkii waa la garaacay, Ragga ayaa xoog lagu gudayay, waxaa faafay rabashadaha ka dhan ah haweenka. Waxaas oo dhan ayaan sameeyey. Haddii aanad samayn arrintaas dadka ayaa kaa hor imanayay."
Image caption Booliiska ayaa xabbado ku riday xaafadda Dandora sannadihii 2007-8 - qofka gurigan lehna wuu jiibay marka ay rasaastan ku dhacday gurigeeda
Markii rabshaduhu dhamaadeen, Edward waxaa uu ka cararay deegaankii uu joogay, isaga oo ka cabsi qaba fal celin uga timaada deriskiisii uu argagaxa geliyay. Qoomamadiisii waxay noqoto mid deg deg ah oo dhib badan.
"Waxaan ka cararay ciidaydii aniga oo niyad xun. aad ayaan u cabsanayay, mana doonayn inaan dadka la hadlo. Waxaan noqday qof dibad joog ah,".
James ayaa lasii joogay intii ka hartay kooxdii burcada ahayd ee ku sugnayd Dandora, laakiinse isaga laftiisu waxaa uu go'doon ku noqday guri. Waxaa uu yiri " Naftayda ma qeexi karo, gudaha guriga ma joogi karo, mararka qaarkood guriga kama baxo ilaa afar maalmood".
Shanta sano ee soo socota, James iyo Edward waxay arkayeen saaxiibadood oo ku dhimanaya dagaalo u dhexeeya burcadda, ama la kulmaya dhibaatooyin ka dhashay rabshadihii 2007-8-dii, kadib markii lagu xukumay xabsiyo iyaga oo lagu eedeeyey in ay falal dil ah gaysteen.
2012-kii, Labadooduba waxay garteen in ay isbedel sameeyaan, si lama filaan ah, ayayna uga qayb galeen tababar ku saabsan isdhex-galka qabaa'ilka, taasi oo ay soo qaban qaabisay hay'ad khayri ah.
"Intaa wixii ka horeeyey, ee aan xasuusto inaan arko Edward waxay ahayd todobaadyadii ay rabshaduhu socdeen, waliba aniga oo meel fog ka arkaya," ayuu yiri James.
Wakhti dheer ayay qaadataa in raggu ay markale is aaminaan, laakiinse hadda, oo ay gacan ka heleen dhex-dhexaadiyayaal waxay bilaabeen in ay markale wada hadlaan.
"Waxay qorshaynayeen qalalaase dhaca, waxay dadka ku dhiiri gelinayeen in ay codeeyaan, iyaga oo hubaysan,"
James, Burca hore
Edward ayaa markii ugu horaysay ka hadlay rabshadihii ka dhashay doorashooyinka. "Waxaan awood u yeeshay inaan shaaca ka qaado waxaan hore u sameeyey, waxaanna garowsaday inaanan mar kale samayn".
James ayaa la hishiisay qof dumar ah, hadda oo ay jirto 60 sano, James ayaa gacan ka gaystay in gurigeeda la gubo muddo toban sano kahor ah, sidaas oo ay tahayna wali waa aqoonsanayaa iyada iyo ehelkeedaba.
Labadooduba waxay go'aansadeen in ay u noolaadaan sida deriskooda oo kale, oo aanay kala qaybin siyaasaddu, ayuu yiri. sidaasi oo ay tahayna meesha ay haweenaydan ku nooshahay maaha meel uu si sahal ah ku booqan karo.
Image caption Fariimo nabadeed ayaa sidoo kale lagu qoray darbiyada Korogocho, oo ay daris yihiim xaafadda Dandora
Cabsida laga qabo in markale taariikhdu dib isu soo celiso, doorashada dhici doonta talaadada, James ayaa naftiisa ku biimeeyey in uu ka qayb galo xilli danbe oo habeen ah kulan xog ururin ah oo ay lahaayeen koox burcad ah iyo siyaasiyiin kaasi oo looga hadlayay deganaansho la'aan.
"Waxay qorshaynayeen qalalaase dhaca, waxay dadka ku dhiiri gelinayeen in ay codeeyaan, iyaga oo hubaysan," ayuu yiri.
Edward iyo James ayaa xilli hore go'aan qaatay, waxayna naftooda iyo caruurtooda kala baxeen Dandora xilliga doorashadu dhacayso.
"Dhaqanka soo jireenka ah doorka ragu waa ilaalin iyo u diyaar garowga caqabadaha, sidaas daraadeed waxaa jira jiil cusub oo u halgamaya sidii ay bulshada dhexdeeda kaalin ugu yeelan lahaayeen. Natiijada ka dhalatayna waa awood si aan haboonayn loo adeegsaday". Waxaa sidaas sheegtay Nelly Njoki oo ka tirsan xarunta waxbarashada iyo dhiiri gelinta bulshada
Raganimadu waa wejiga wanaagsan ee wax walba, nin ahaan, waa adeegsiga tamarta iyo wax walba oo aad haysato si aad u dhiiri geliso haweenka isla markaana u noolaato si caadi ah. Fikirka aan aaminsanaa waxaa uu ahaa nin ahaan inaadan ku hor ooyin dadka, ninku inaanu noqon mid tamar daran. Laakiinse waxaan ogaaday in ninku uu yeelan karo meelo uu ku liidan karo.
Michael ayaa markii uu jiray 11 sano waxaa uu doorashadii dhacday 2007-dii ku waayay saaxiibo ay dileen kooxo burcad ah.
" Meeshaan ka imi, waxay dhahaan ninku waa in uu ad-adagyahay," ayuu yiri
"Waxay sidoo kale dhahaan dumarka maaha in ay sidaas noqdaan"
Erayadan maaha kuwo ku haboon dhallinta ku nool Dandora, laakiinse xaqiiqadu waa in loo sheego mustaqbal ifiya.
Image caption Waxay u midoobeen ka hortagga rabshadaha: waa Edward iyo Jamesgacmaha is haysta
Xaqiiqada ah in Edward iyo James ay ku dhex lugeeyaan Dandora, sadex maalmood kahor doorashada, waa tilmaam muujinaysa rajo.
"Hadda ayaan ogaaday micnaha ay leedahay inaad u noolaato si caadi ah, oo lamid ah dadka kale," ayuu yiri James. "Weligay horay uma ogayn".
Doorashada Kenya 2017